Thailand< Travel | Save Burma
အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ် Posts Tagged ‘Thailand< Travel’
World Focus on Burma (6 Jan 08)
EU wants Thailand to turn up the heat on Burma
Bangkok Post, Thailand - European Union special envoy for Burma Piero Fassino plans to visit Thailand over the next two months to drum up support for coordinated pressure on the … (If the URL is not working, click here.)
Internal affairs (Road to Rangoon)
Calcutta Telegraph, India - So Ramesh enlightened him — CPI(M) general secretary Prakash Karat was born in Burma (as Myanmar was called then). Pranabda added that former West Bengal CM …
Redlands Daily Facts, CA - Pagan (Bagan),aseries of pagodas and temples built between the 11th and 13th centuries on the banks of the Irrawaddy River in Myanmar (Burma). …
Religions find controversy within ranks
Elmira Star-Gazette, NY - •Protests: Buddhist monks prompted the largest pro-democracy protests since 1988 in Burma, also known as Myanmar, when they marched in September to protest …
Tennesseans strive to change the world
Robertson County Times, TN - He’s seen an influx of refugees from his native Burma, now known as Myanmar. Though most are Christian, he’d like the Buddhist center to serve asacultural …
Scrounging for the generals’ scraps
Toronto Star, Canada - US first lady Laura Bush has urged jewellers not to buy gems from Burma, also known as Myanmar, the name imposed by the generals in 1989. …
Indiana senators back electric-vehicle research James R. Carroll
Louisville Courier-Journal, KY - The Senate has passed legislation to further tighten economic sanctions on the military junta in Myanmar, also known as Burma. The legislation, sponsored by …
How to brand products through culture
Spero News - Journalists who write about religion chose the Buddhist monks of Myanmar (Burma) and their pro-democracy struggle over Pope Benedict XVI, President Bush, …
Written by Lwin Aung Soe January 6, 2008 at 4:22 am
Tagged with Burma, Controversy, EU, India, Myanmar, Pressure, Religion, Thailand< Travel	Recent Posts (Save Burma – new site)မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တနေ့တခြား သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းလာနေ November 22, 2011ရပ်/ကျေး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ဥပဒေ မရှိသင့် November 22, 2011ကျုံးကို ဖောက်ထွက်နိုင်မယ့် ဆင် November 12, 2011ခေတ်သစ်မြန်မာကို တည်ဆောက်ကြသည့်အခါ November 7, 2011အစိုးရဆိုတာ လွှတ်တော်ကို အခြေခံထားရတာဖြစ်လို့ ဘာလုပ်လုပ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပဲ လုပ်ပါ။ October 18, 2011ကမ္ဘာ့လူရမ်းကားကြီး တရုတ်ရဲ့ ၂၁ ရာစု ကျုးကျော်နယ်ချဲ့ရေး မဟာဗျူဟာမှာ ပထမ ပစ်မှတ်က မြန်မာပြည် October 4, 2011မတရားသော တည်ဆဲဥပဒေများကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ၏ အနုတ်လက္ခဏာ October 2, 2011ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင် လူထုဆန္ဒပြခြင်းသည် မဆန်းပါ။ September 26, 2011ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ၀န်ကြီးဌာနလေးခုနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ကော်မတီလေးရပ်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း တိုက်တွန်းပြောကြား September 15, 2011မည်သည့် ကန့်ကွက်မှုများ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းပြောကြား September 15, 2011Top Postsတခုလပ်တယောက်ရဲ့ ပေါက်ကွဲသံစဉ်များ